Homepage / ဗဟုသုတ / အသစ်ထပ်မံတွေ့ရှိရသော သတ္တဝါ ( ၁၀ ) မျိုး
ကမ္ဘာပေါ်က သတ္တဝါတိုင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မျိုးစိတ်အသစ်တွေ ထပ်မံတွေ့ရှိနေရပါတယ် ။ နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့အမျှ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ သတ္တဝါတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ် ။ အသစ်ထပ်မံတွေ့ထားတဲ့ သတ္တဝါတွေထဲကမှ သင်တို့ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တောင်မမြင်ဖူးလောက်တဲ့ သတ္တဝါ ၁၀ ကောင်ကို တင်ပြသွားမှာပါ ။
၁. Aye Aye
မက်ဒါဂက်စကာ တောအုပ်တွေထဲမှာနေတဲ့ ဒီထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါကို မြင်ရုံနဲ့ဘယ်လိုသတ္တဝါမျိုးလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါဘူး ။ ရှေ့သွားကြီးနှစ်ချောင်းရယ် ပြန့်ကားနေတဲ့နားရွက်ရယ် ကိုကြည့်ရတာတော့ Gremlin လိုအကောင်အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် ။
ဒီရှေးကျပြီး ရုပ်ဆိုးတဲ့ငါးဟာ ဒိုင်နိုဆောတွေမပေါ်ပေါက်ခင်ကထဲကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒိုင်နိုဆော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း 360လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ခဲ့အတွက် ဒီငါးကို သက်ရှိကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတစ်ခုအဖြစ်တင်စားခေါ်နိုင်ပါတယ် ။ ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီငါးဟာ ရှေးအကျဆုံး ကျောရိုးရှိသတ္တဝါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် ။
၃. The Maned Wolf
ဒီသတ္တဝါကိုကြည့်ရင်တော့ မြေခွေးလိုလို ဝံပုလွေလိုလို ထင်မိမှာပဲ တကယ်တမ်းမှာတော့ တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး ။ မျိုးရိုးဗီဇကို သေချာလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူ ဝံပုတွေ မြေခွေးတွေ မျိုးနွယ်စုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ Chrysocyon ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်ဝင်သတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ် ။
၄. Giant Gridled Lizards
ပုတ်သင်ညိုနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့အရွယ်အစားကြောင့် ဒီနာမည်ပေးထားတာပါ ။ ဒီသတ္တဝါဟာ ပုတ်သင်ညိုမျိုးနွယ်ထဲမှာ အကြီးဆုံးမျိုးနွယ်စုဖြစ်ပါတယ် ။ Hobbit ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဒီပုတ်သင်ညိုမျိုးနွယ်ရဲ့ အမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ နဂါးတစ်ကောင်ကို Smaug လို့နာမည်ပေးထားခဲ့ပါတယ် ။
ပင်လယ်နွားလို့ခေါ်တဲ့ဒီနို့တိုက်သတ္တဝါ Dugong ဟာ အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး ပင်လယ်ထဲမှာနေတဲ့အကောင်ဖြစ်ပါတယ် ။ ပင်လယ်နွားလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့ဟာ ပင်လယ်မြက်တွေကိုအဓိကထားပြီးစားသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ ။ ဒီသတ္တဝါတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်မလဲသင်တွေးနေရင်တော့ အံ့သြသွားမိလိမ့်မယ် ။
သူတို့ဟာဆင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်နေသတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့အနီးစပ်ဆုံးရေနေသတ္တဝါကတော့ ပင်လယ်ဖျံတွေပဲဖြစ်တယ် ။
၆. Yeti Crab
ဒီဂဏန်းတွေကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ရေခဲတမျှအေးနေတဲ့ အီစတာကျွန်းနားက ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ ။ ဒီရတီဂဏန်းတွေဟာ ဟာမစ်ဂဏန်းမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဒီရေအတက်အကျရှိတဲ့ ကန်တွေမှာကျက်စားပါတယ် ။ရတီဆိုတဲ့အမည်ရရှိလာတာကတော့ သူတို့ရဲ့လက်ပေါ်ကအမွှေးအမျှင်တွေကြောင့်ပါပဲ ။
၇. Cantor’s Giant Shoftshell Turtle
ဒီလိပ်ဟာ အခွံပြားတဲ့တစ်ခုထဲသောလိပ်မျိုးနွယ်ပါပဲ ။ သူ့မှာပြားနေတဲ့ခေါင်းရှိပြီးမျက်လုံးတွေက နှုတ်သီးနားကို ကပ်နေပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အခွံဟာချောမွတ်နေပြီးတော့ သံလွင်ဆီရောင်မျိုးရှိပါတယ် ။
ဒီသတ္တဝါတွေကတော့ သစ်ကုလားအုပ်နဲ့ဒရယ်ကြားပေါင်းထားတဲ့သတ္တဝါတွေပါပဲ ။ သူတို့မှာ ရှည်လျားတဲ့ လည်ပင်းနဲ့ ခြေထောက်တွေရယ်..ခပ်ပြားပြားခေါင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ တိုပြီး နူးညံ့တဲ့အမွှေးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ် ။ ၄၁ လက်အမြင့်အထိ အရပ်ရှည်နိုင်ပြီး အလေးချိန်အားဖြင့်တော့ ပေါင်60ကနေ ၁၀၀ အတွင်းမှာရှိပါတယ် ။ ဒရယ်တွေထက်တော့အရွယ်အစားသေးပါတယ် ။
၉ .Amazon River Dolphin
မြစ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ အကြီးဆုံး လင်းပိုင်တွေဖြစ်ကြတယ် ။ အထီးဟာ ၈ ပေခွဲလောက်အထိ ရှည်လားနိုင်ပြီး ပေါင် ၃၅၀ ၄၀၀ လောက်အထိအလေးချိန်ရှိနိုင်ပါတယ် ။ အမတွေကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် အထီးတွေလောက်မကြီးကြပါဘူး ။
၁၀ .Sunda Colugo
ဒီ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ရှဉ့်ကို အရှေ့တောင်အာရှမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ ။ ဒီသတ္တဝါကို အင်ဒိုနီးရှား ထိုင်း မလေးရှားနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ။ colugos တွေဟာ သစ်ပင်ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့နို့တိုက်သတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့ အရှည်အားဖြင့် ၁၄ လက်မမှ ၁၆ လက်မရှိပြီး အလေးချိန်ကတော့ ၂ ပေါင်ကနေ ၄ ပေါင်အထိရှိနိုင်ပါတယ် ။
ကမ်ဘာပျေါက သတ်တဝါတိုငျးကို ရှာဖှတှေရှေိ့ဖို့ဆိုတာမဖွဈနိုငျပါဘူး ။ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ မြိုးစိတျအသဈတှေ ထပျမံတှရှေိ့နရေပါတယျ ။ နညျးပညာတိုးတကျလာတဲ့အမြှ ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ သတ်တဝါတှလေညျးပျေါပေါကျလာပါတယျ ။ အသဈထပျမံတှထေ့ားတဲ့ သတ်တဝါတှထေဲကမှ သငျတို့ဘဝမှာ တဈကွိမျတောငျမမွငျဖူးလောကျတဲ့ သတ်တဝါ ၁၀ ကောငျကို တငျပွသှားမှာပါ ။
မကျဒါဂကျစကာ တောအုပျတှထေဲမှာနတေဲ့ ဒီထူးဆနျးတဲ့သတ်တဝါကို မွငျရုံနဲ့ဘယျလိုသတ်တဝါမြိုးလဲဆိုတာ ဘယျသူမှမဆုံးဖွတျနိုငျကွပါဘူး ။ ရှသှေ့ားကွီးနှဈခြောငျးရယျ ပွနျ့ကားနတေဲ့နားရှကျရယျ ကိုကွညျ့ရတာတော့ Gremlin လိုအကောငျအမြိုးအစားဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ ။
ဒီရှေးကပြွီး ရုပျဆိုးတဲ့ငါးဟာ ဒိုငျနိုဆောတှမေပျေါပေါကျခငျကထဲကပျေါပေါကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ဒိုငျနိုဆော ကြောကျဖွဈရုပျကြှငျးတှဟော လှနျခဲ့တဲ့နှဈသနျးပေါငျး 360လောကျကွာမွငျ့ခဲ့ပွီဖွဈခဲ့အတှကျ ဒီငါးကို သကျရှိကြောကျဖွဈရုပျကြှငျးတဈခုအဖွဈတငျစားချေါနိုငျပါတယျ ။ ပညာရှငျတှကေတော့ ဒီငါးဟာ ရှေးအကဆြုံး ကြောရိုးရှိသတ်တဝါဖွဈနိုငျတယျလို့ခနျ့မှနျးထားပါတယျ ။
ဒီသတ်တဝါကိုကွညျ့ရငျတော့မွခှေေးလိုလို ဝံပုလှလေိုလို ထငျမိမှာပဲ တကယျတမျးမှာတော့ တဈခုမှမဟုတျဘူး ။ မြိုးရိုးဗီဇကို သခြောလလေ့ာပွီးတဲ့အခါမှာတော့ သူ ဝံပုတှေ မွခှေေးတှေ မြိုးနှယျစုနဲ့မသကျဆိုငျပဲ Chrysocyon ဆိုတဲ့မြိုးနှယျဝငျသတ်တဝါတဈကောငျဖွဈကွောငျးတှရေ့ပါတယျ ။
ပုတျသငျညိုနှယျဝငျဖွဈပွီးတော့ သူ့အရှယျအစားကွောငျ့ ဒီနာမညျပေးထားတာပါ ။ ဒီသတ်တဝါဟာ ပုတျသငျညိုမြိုးနှယျထဲမှာ အကွီးဆုံးမြိုးနှယျစုဖွဈပါတယျ ။ Hobbit ဇာတျကားထဲမှာတော့ ဒီပုတျသငျညိုမြိုးနှယျရဲ့ အမညျကိုအစှဲပွုပွီးတော့ နဂါးတဈကောငျကို Smaug လို့နာမညျပေးထားခဲ့ပါတယျ ။
ပငျလယျနှားလို့ချေါတဲ့ဒီနို့တိုကျသတ်တဝါ Dugong ဟာ အသကျရှငျသမြှကာလပတျလုံး ပငျလယျထဲမှာနတေဲ့အကောငျဖွဈပါတယျ ။ ပငျလယျနှားလို့ချေါရတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ သူတို့ဟာ ပငျလယျမွကျတှကေိုအဓိကထားပွီးစားသုံးတဲ့အတှကျကွောငျ့ပါပဲ ။ ဒီသတ်တဝါတှဟော ဘယျလိုမြိုးနှယျဝငျတှဖွေဈမလဲသငျတှေးနရေငျတော့ အံ့သွသှားမိလိမျ့မယျ ။
သူတို့ဟာဆငျမြိုးနှယျဝငျတှဖွေဈတဲ့ ပငျလယျနသေတ်တဝါတှဖွေဈပွီးတော့ သူတို့နဲ့အနီးစပျဆုံးရနေသေတ်တဝါကတော့ ပငျလယျဖြံတှပေဲဖွဈတယျ ။
ဒီဂဏနျးတှကေို ၂၀၀၅ ခုနှဈက ရခေဲတမြှအေးနတေဲ့ အီစတာကြှနျးနားက ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာထဲမှာတှရှေိ့ခဲ့တာပါ ။ ဒီရတီဂဏနျးတှဟော ဟာမဈဂဏနျးမြိုးနှယျတှဖွေဈပွီး ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ ဒီရအေတကျအကရြှိတဲ့ ကနျတှမှောကကျြစားပါတယျ ။ရတီဆိုတဲ့အမညျရရှိလာတာကတော့ သူတို့ရဲ့လကျပျေါကအမှေးအမြှငျတှကွေောငျ့ပါပဲ ။
ဒီလိပျဟာ အခှံပွားတဲ့တဈခုထဲသောလိပျမြိုးနှယျပါပဲ ။ သူ့မှာပွားနတေဲ့ခေါငျးရှိပွီးမကျြလုံးတှကေ နှုတျသီးနားကို ကပျနပေါတယျ ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ အခှံဟာခြောမှတျနပွေီးတော့ သံလှငျဆီရောငျမြိုးရှိပါတယျ ။
ဒီသတ်တဝါတှကေတော့ သဈကုလားအုပျနဲ့ဒရယျကွားပေါငျးထားတဲ့သတ်တဝါတှပေါပဲ ။ သူတို့မှာ ရှညျလြားတဲ့ လညျပငျးနဲ့ ခွထေောကျတှရေယျ..ခပျပွားပွားခေါငျးနဲ့ ကွီးမားတဲ့မကျြလုံးတှရှေိပါတယျ ။ ခန်ဓာကိုယျကိုတော့ တိုပွီး နူးညံ့တဲ့အမှေးတှနေဲ့ဖုံးအုပျထားပါတယျ ။ ၄၁ လကျအမွငျ့အထိ အရပျရှညျနိုငျပွီး အလေးခြိနျအားဖွငျ့တော့ ပေါငျ60ကနေ ၁၀၀ အတှငျးမှာရှိပါတယျ ။ ဒရယျတှထေကျတော့အရှယျအစားသေးပါတယျ ။
မွဈအတှငျးမှာနထေိုငျတဲ့ အကွီးဆုံး လငျးပိုငျတှဖွေဈကွတယျ ။ အထီးဟာ ၈ ပခှေဲလောကျအထိ ရှညျလားနိုငျပွီး ပေါငျ ၃၅၀ ၄၀၀ လောကျအထိအလေးခြိနျရှိနိုငျပါတယျ ။ အမတှကေတော့ ပုံမှနျအားဖွငျ့ အထီးတှလေောကျမကွီးကွပါဘူး ။
ဒီ ပြံသနျးနိုငျတဲ့ ရှဉျ့ကို အရှတေ့ောငျအာရှမှာတှရှေိ့ခဲ့တာပါ ။ ဒီသတ်တဝါကို အငျဒိုနီးရှား ထိုငျး မလေးရှားနဲ့ စငျကာပူနိုငျငံတှမှော တှရှေိ့နိုငျပါတယျ ။ colugos တှဟော သဈပငျပျေါမှာနထေိုငျတဲ့နို့တိုကျသတ်တဝါတှဖွေဈပွီးတော့ အရှညျအားဖွငျ့ ၁၄ လကျမမှ ၁၆ လကျမရှိပွီး အလေးခြိနျကတော့ ၂ ပေါငျကနေ ၄ ပေါငျအထိရှိနိုငျပါတယျ ။
Previous post ဘန်ကောက်မြို့လယ်က ကုန်တိုက်ထဲ မြန်မာ ၁၀၀ ကျော် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား
Next post ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး (၁၀) နိုင်ငံ